Mpanamboatra harato Architectural | China Architectural harato Factory & mpamatsy
Ny lamba metaly tariby metaly dia manolotra fomba haingo maoderina ho an'ny fananganana. Rehefa ampiasaina ho toy ny lambam-baravarana izy dia manome fanovana loko isan-karazany miaraka amin'ny hazavana ary manome sary an-tsaina tsy voafetra.
Ny vy nitarina dia ampiharina amin'ny tranobe manampy amin'ny fampihenana ny tabataba.
Ny efijery mesh manitatra dia manana endrika tsara tarehy miaraka amin'ny lamina fanavaozana sy haingo.
Ny valindrihana metaly perforated dia misy haingon-trano tsara sy ny fiasa momba ny feo
Ny mitafy vy metaly mitazona ny tranobe tsy ho simba amin'ny toetrandro
Ny fametahana vy vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly dia be mpampiasa amin'ny mpanao mari-trano. Izy io dia manambatra ny fiarovana ny fiainanao manokana sy ny asany maro toy ny jiro, rivotra, fitokana-monina, sarin'ny masoandro.
Tady maitso vy mesh maitso ho an'ny zavamaniry mananika
Ny rindrina maitso vy mesh maitso dia mamporisika ny fitomboana ara-pahasalamana ho an'ny zavamaniry mananika rehetra toa ny voaloboka amin'ny faritra rehetra, na garazy fijanonana, fiantsonan'ny magazay na làlambe an-tanàn-dehibe.
Curtain vita amin'ny metaly metaly - Mpizara zaridaina tsara
Ny lambam-by vita amin'ny vy, antsoina koa hoe lambam-bolan'ny rojo, namboarin'ny bolongana metaly bitika kely miato amin'ny tadiny na rojo, dia malaza hatrany hatrany.
Ny lambam-baravarankely dia manakana ny bibikely manidina fa ny rivotra sy hazavana vaovao
Curtain Link Chain - Safidy tsara ho an'ny volavolan-tsoratry ny rohy anatiny, antsoina koa hoe écran fly fly, dia vita amin'ny tariby aliminioma miaraka amin'ny fitsaboana anodized. Araka ny fantatsika rehetra, ny fitaovana aliminioma dia maivana, azo averina, mateza ary manana rafitra miovaova. Izany dia miantoka ny lambam-baravarankely misy rohy dia misy fanoherana tsara ny harafesina ary fananana fisorohana afo tsara. Ny lambam-pandrefesana rojo haingon-trano dia manome fiarovana manokana ankoatry ny vokatra tsara haingo. Mandritra io ti ...
Conveyor Belt Mesh mety amin'ny fananganana Facade sy Cladding.
Ny fehikibo conveyor maritrano dia misy fehikibo conveyor tariby fisaka, fehin-kibo manenjana indroa, fehin-kibo manenjana mifangaro ary fehikibo conveyor tohatra.
Metal Coil Drapery ho an'ny endrika anatiny sy mahaliana
Ny drapery coil metaly dia manana fananana tsy misy afo mirehitra, rivotra sy fifindran'ny hazavana, izay safidy mety indrindra amin'ny haingo anatiny sy ivelany.
Curtain harato ho an'ny mpizara habakabaka sy ny endrika anatiny
Ny lambam-baravarana mesh mizana dia vita amin'ny kofehy vita amin'ny takelaka vita amin'ny aliminioma, izay aforitra miaraka amin'ny sisiny ary misy kofehy mifatotra na voatenona.
Chainmail CurtainDecorates ny efitranonao sy ny biraonao
Ny lambam-baravarankely Chainmail dia singa haingon-trano miavaka amin'ny toerana onenana sy fivarotana. Ny famirapiratany metaly manokana sy ny famirapiratany mamorona tontolo tsy manam-paharoa.